Raggii ka dambeeyay dilkii Hindiyo Xaaji oo saaka la toogtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Raggii ka dambeeyay dilkii Hindiyo Xaaji oo saaka la toogtay
9th April 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Maxkamadda Darajada Koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay labadii nin ee ka dambeysay dilka Allaha u naxariistee Marxuum Hindiyo Xaaji Maxamed, kuwaasi oo kala ah C/risaaq Maxamed Barrow Caddow iyo Xasan Nuur Cali Faarax.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka Cabdcasiis Guuleed Afrika ayaa ku soo waramay in maxkamadda ay saaka xukunkii cadaaladda ah ku fulisay C/risaaq Maxamed Barrow Caddow iyo Xasan Nuur Cali Faarax oo ahaa raggii dilay Allaha u naxariistee marxuum Hindiyo Xaaji Maxamed oo ka mid ahayd suxufiyiinta Wasaaradda Warfaafinta.
Sadexda bishii 12aad ee sanadkii 2015 ka ayay ahayd markii C/risaaq Maxamed Barrow Caddow iyo Xasan Nuur Cali Faarax ay gaarigeeda Allah u naxariistee Hindiyo Xaaji Maxamed Kheyre ugu xireen qarax, waxaana 25ka bishii February Maxkamadda darajada Koowaad ee ciidanka qalabka sida ay xukunno kala duwan ku riday labada nin, iyadoo maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ay laashay xukunkaasi, kuwaasi oo 20-kii March ay labaduba ku riday xukun dil ah, waxaana saaka lagu fuliyay xukunkaasi.
Australia’s women cricketers earn big pay raise upto Aus$65,000
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hambalyo u diray Madaxweynaha Djibouti oo dib loo doortay